Ekoatora: Tian’ireo mpampiasa Twitter ny Fireneny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2010 4:59 GMT
Nankalaza tamin'ny fomba miavaka ny tsingerintaonan'ny fahaleovantenam-pireneny ireo Ekoatoriana mpampiasa twitter. Isan-taona rehefa tonga ny 10 Aogositra, mankalaza ny fahaleovantena azony tamin'i Espana tamin'ny 1809 ny vahoaka ao amin'ity firenena Amerikana Tatsimo ity, izay nanjary lasa ho Luz de América (Fahazavan'i Amerika). Fotoana iray ihany koa io ho fifanabeazana, ary ho toy ny andro tsy fiasàna manerana ny firenena, nomena andro hialan-tsasatra daholo ireo mpiasa ao amin'ny governemanta.
ireo volokano Cayambe (havia) sy Antisana (havanana), tsinjo avy eny an-tampon'i Cotopaxi, any amin'ny (19,347ft) ambonin'ny ranomasina avy amin'ny sary Flickr an'i magnusvk ary ampiasàna ny Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic license
Saingy somary hafa kely ny tamin'ity taona ity, indrindra indrindra ho an'ireo mponina mavitriky ny aterineto, amin'ny fampiasàna ny fitaovana fitorahana blaogy sy ireo tambajotra sosialy. Maro tamin'ireny mpampiasa ireny no naniry hanome endrika miabo bebe kokoa ny firenen-dry zareo. Avy amin'ny hevitra mpitoraka blaogy vitsivitsy Pablo Garzón, Alfred Naranjo, Alfredo Velazco, Paúl Barahona, ary Priscilla Riofrio, dia tafatsangana ny tranonkala iray ho fanohanana ny hetsika antsoina hoe Te Amo Ecuador (Tiako ianao ry Ekoatora). Ilay hetsika dia manentana ny hampiasàna ny tenifototra #teamoecuador hampiasaina amin'ny fankalazàna ny tsingerintaonan'ny fahaleovantenan'i Ekoatora. Araka ny ambaran'ilay tranonkala [es]:
Ny tanjona dia ny haneho fomba fikarakarana sakafo mafilotra, toerana fanaovana fizahantany, toerana tokana an-tany, ireo rehareha ara-panatanjahantena, tantara, ary antsipirihany hafa momba an'i Ekoatora, izay manasongadina ny reharahanay amin'ny maha-teratany Ekoatoriana.
Tsy olana izay toerana misy ny Ekoatoriana iray, na ao an-tanindrazany na any ivelany, fa dia nahazo fanohanana feno tokoa ilay hetsika. Eny fa na dia ny governemantam-pirenena aza dia nandray anjara tamina tweet iray ahitàna tenifototra mifandraika amin'izany[es] avy amin'ny kaonty twitter ofisialin'ny Fiadidiana ny Lapam-panjakana (@presidencia_ec). Nanentana ny hafa handefa bitsika (tweet) amina fotoana telo samihafa ireo mpikarakara: amin'ny 11:00, 04:00 tolakandro, ary amin'ny 10:00 alina, izay heverina ho ny ora be mpiditra indrindra amin'ny aterineto ao Ekoatora.
Rocío Elizalde of the blog La Libertad de Expesión es un Derecho del Periodismo en Ecuador [es] (Ny Fahalalàhana Miteny dia Zo amin'ny fampitam-baovao ao Ekoatora) dia manazava ny antony nandraisany anjara amin'ny hetsika #teamoecuador:
Taratry ny fahalinana iray any Ekoatora io, satria ny tsirairay dia samy nandefa bitsika (tweet) misy ny #teamoecuador nanasongadina ny endrika hoe nahoana i Ekoatora no firenena mahate-ho tia/mahafatifaty/mahasondriana. Ity dia nahafahana namantatra ny fahasamihafàna lalim-pàka eo aminay, ny halehibenay, ny zava-tsarobidy anananay, ary ny hakanton'ny hatsaran'ny vahoaka misy ao anatin'ity Ekoatora mahate-ho tia ity.
Patty_LDU, mpitoraka blaogy dia manoratra ny antony hoe nahoana ny Fahaleovantenan'i Ekoatora no raisina ho lohany amin'ireo iray tarika aminy aty Amerika Latina [es] ary inona no andraikitra notanan'ny iray tamin'ireo reny nanangana azy, Manuela Cañizares [es]. Manontany ny tokony hataon'ny Ekoatoriana hankalazàna ireo izay nanorina ity firenena ity izy:
Ao anatin'ny tantaran'i Amerika Atsimo, ity no tena dingam-piainana goavana voalohany indrindra, ary amin'izao fotoana izao indrindra no tokony hahatsiarovantsika hoe nahoana ireny maherifon'ny firenena ireny no nanao toy izany? Ankehitriny, miaraka amin'ny fahafaha-manao ara-teknolojika tsy tambo isaina eo am-pelan-tanantsika, moa tsy afaka miteny isika hoe INDRETO IZAHAY? Ary mampiseho amin'izao tontolo izao fa misy isika ary ny anton'ny ady ataontsika?
Taitran'ny fampitam-baovao [es] mikasika ny fomba hanomezan-danja ny tena, #teamoecuador dia nikendry ny hanatratra ny laharana fahafito amin'ireo lohahevitra manokana maneran-tany amin'ny Talata 10 Aogositra. Nisarika ny sain'ny maro tamin'ireo fantsom-baovao mahazatra ao Ekoatora ihany koa ireo mpampiasa Twitter. Na izany aza, ity fahalavorariana ity dia nanaraka ny fametrahana tamina lisitr'ireo lohahevitra manokana. Tamin'ny 02 Aogositra, ireo mpampiasa twitter tao Ekoatora dia nanapariaka vaovao momba ny zava-manidina tsy fanta-pihaviana (OVNI) iray nisidina an'i Guayaquil, saingy ankehitriny toa nivadika ho resaka habobo [es]. Stalin Granda, mpitoraka blaogy dia mitantara antontan'isa vitsivitsy [es] sady manoratra fa tamin'ny mitatao vovonan'ny 10 Aogositra, nisy 4,402 ny bitsika (tweets) nahitàna ilay tenifototra avy amina kaonty twitter 1,034 samihafa.
Na dia toa maro aza ireo olona nahita maminy tamin'ilay hetsika #teamoecuador sy ny fientanam-po tsara ho an'ny tanindrazan-dry zareo, nisy ihany koa ireo olona izay toa tsy te-hankalaza mihitsy. Andrea Caracola [es] mpitoraka blaogy dia nanana fisalasalàna manodidina ity hambom-pom-pitiavan-tanindrazana ity. Raha nahafaly azy ny nanasongadinan'ny Google ao Ekoatora ny fahaleovantenan'ny fireneny, dia manoratra izy fa tsy dia ireharehany loatra ny maha-teratany Ekoatoriana azy.
Ekoatoriana aho satria izay no voalaza ao anatin'ny sorapiankohonako, satria tsy maintsy miondrika manoroka saina aho ary satria izay no nosoratan-dry zareo ao anatin'ny karapanondrom-pireneko, fa ny hoe ho tia tanindrazana iray, sanatriavina. Miala tsiny rey olona, fa tena tsy mahatsapa ho afa- mirehereha amin'ny nahaterahako teto aho. Ao anatina tontolo iray, planeta sivy, firenena 204, kaontinanta 5, nosy 809, ranomasimbe 7… dia teto aho no natao ho teraka!
Misy tenifototra maro hafa koa toy ny hoe #QuieroEcuadorEnTT (Tiako ho hita anaty lohahevitra manokana i Ekoatora) ary #ApoyoEcuadorTT (Tohano ny lohahevitra miresaka an'i Ekoatora) izay tsy nahazo fanohanana betsaka mitovy amin'izany. Mpitoraka blaogy avy amin'ny La Plegaria de un Pagano [es], no nihevitra tamina fotoana iray voafaritra, fa hoe novatsian'ny governemantam-pirenena ilay hetsika mba handikàna vilana ny resaka fampihavànana.
Na teo aza anefa ireny ahiahy sy fihetseham-po ho toy ny tsy tia tanindrazana ireny, nisy marobe ireo mpampiasa Twitter faly nampiasa ilay tenifototra tamin'ilay andro fialantsasatry ny firenena.